Wararka DDS: Madaxweyne Mustafe Cagjar iyo Ururka ONLF oo sii kala fogaanaya – Radio Daljir
Luulyo 31, 2019 8:35 b 0
Waxaa isa soo taraya khilaafka u dhexeeya Jigjiga iyo Jabhadda ONLF kaas oo sii xoogeystay kaddib markii xarig lala beegtay xubno kamid ah ururka xorriyad-doonka ee ONLF.
Wararkii ugu danbeeyey ee aan deegaanka ka helayno ayaa sheegaya in degmada Shaygoosh ee gobolka Qoraxey ay weli ku xiranyihiin xubno kamid ah ONLF iyo taageerayaashooda oo kor u dhaafaya 30 qof. Xubnaha la xiray ayaa hore loo geeyey Jigjiga, taas oo lagu macneeyey in maamulka Madaxweyne Mustafe Cagjar uu uga danlahaa si uu u yareeyo amaba uga hortago abaabulka siyaasadeed ee Ururka ONLF uu ka wado magaalada Shaygoosh iyo deegaanada kale ee DDS.
Doorashooyinka soo socda ee DDS ayaa la saadaalinayaa in uu ku guulaysan doono ururka ONLF, waa se haddii ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi, sida ay nala qaybsadeen siyaasiyiin ku sugan Jigjiga iyo deegaano kamid ah gobolka Qoraxey.
Hoggaanka ONLF ayaa maamulka Madaxweyne Cagjar ku tilmaama mid aan magac iyo madax kore ma ahee aan wax kale ka duweneyn kii Madaxweyne Cabdi Iley, siyaasaddii Jigjiga ee Ururka ONLF-na ay weli tahay mid sideedii kal hore aan waxba iska badalin.
Dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ayaa sheegay in xubnaha ONLF ee xarigga lala beegsaday ay ku jraan Xiis Macallin Maxamed, Xiis Cabdi Daahir iyo Cabdibashir Maxamed Faatule.
Dhanka xorriyada, waxaa xusid mudan in weli deegaanada DDS aysan ka jirin xorriyad dhab ah oo suurtagalisa in muwaadinku uu si run ku dheehantahay ah fikirkiisa iyo fiiradiisaba ula qaybsado saxaafadda xorta ah.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 216 Wararka 20692